Mir iyo Unity 8 ayaa joogi doona Ubuntu 14.10 | Laga soo bilaabo Linux
Mir iyo Unity 8 ayaa joogi doona Ubuntu 14.10
marianogaudix | | Kuwa kale
Waxaan ku sii wadaynaa sheekada xun ee Mexico ama Venezuela ee galabta. Canonical ayaa ku dhawaaqday, iyada oo loo marayo codka Oliver Ries, in Mir iyo Unity8 ay ahaan doonaan kuwo iska caadi ah Ubuntu 14.10.
Agaasimaha masuulka ka ah Mir Oliver Ries ayaa xaqiijiyay in server-ka cusub ee garaafka ah ee MIR iyo Unity 8 ay si caadi ah ugu degi doonaan Ubuntu 14.10. Magaca koodhka Ubuntu 14.10 waxay noqon kartaa Uguisu.
Aragtidayda ayaan idinkaga tegayaa. Waxaan ahay isticmaale Linux Mint iyo Ubuntu.
Waxaan ku qanacsanahay inaan u rajeeyo nasiib wacan Ubuntu Mir iyo Midnimo 8, maadaama aanan ilaawin shaqadii uu Kanonical ka qabtay sameynta Software-ka Bilaashka ah. Nobility wuxuu kugu qasbayaa inaad aqoonsato shaqada Canonical maalmaha ugu horeeya.
Aniga ahaan, Mir iyo Unity 8 waxaa lagu dari doonaa xulashooyinka isticmaalayaasha GNU / Linux, illaa iyo hadda uma arko wax carqalad ku ah jiritaanka Wayland iyo Mir.
Waxaan rajeynayaa in wada noolaanshuhu sidan ku sii soconayo oo aynaan geli doonin dagaal macno darro ah iyo macno la’aan ah, dagaallo in runtu i quruntay oo keenaya aasaasnimada iyo xagjirnimada adeegsadayaal badan oo dhinac ah iyo dhinac kale ah, iyadoo laga tagaayo caqliga wanaagsan. iyo dhaliil wax dhisaysa.
Anigu ma aaminsani in Ubuntu uu raacayo raadadka Apple, ma arko tilmaamo ama ficillo muujinaya in Canonical uu qaadan doono dariiqaas ilaha la xiray.
Waxa aan dhihi karo anigoo ku qiimeynaya aragtideyda waa taas Canonical Waxaad ubaahantahay server garaaf ah oo kugu habboon baahiyahaaga, taasi waa sababta aan u doortay inaan horumariyo MIR.
Dhinaca kale Redhat, Bulshada GNOME e INTEL way doorteen Wayland. Mar labaad ayaan ku celinayaa aragtidayda MIR iyo Wayland way wada noolaan karaan adduunka GNU / Linux.
Faallooyinka wax dhisa waa la soo dhaweynayaa
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Kuwa kale » Mir iyo Unity 8 ayaa joogi doona Ubuntu 14.10
Wax fiican oo aanan sii isticmaali doonin ama aan isticmaali doonin Ubuntu 🙂
Isku mid halkan 🙂
Isla halkaan, waxaan isku dayay OpenSuse 13.1 waana ku faraxsanahay!
Waxaan sidoo kale tijaabinayaa Openuse 13.1, waligey iskama dayin oo waxaan ahay sida caanka ah ee caanka ah waxaan rabay inaan ugu yaraan dhadhamiyo, distoorku ma xuma haba yaraatee, waa bedel fiican oo u wanaagsan ubuntu, way fududahay oo dhakhso badan , iyo KDE si aad u wanaagsan ayey u socotaa, dhibaatada kaliya ee i soo martay waxay ahayd shabakadda, markii horeba kuma xirmin fiilada ethernet, xitaa ma aanan helin isku xirnaanta maareeyaha shabakadda KDE. Waxay ahayd inaan sameeyo dhcpcd enp3s0 si aan u dhaqaajiyo shabakada, ka dibna u rakibo networkmanagger-qt, tan iyo markaas wax dhib ah ma jiraan, waxna kuma dhacaan sidoo kale, laakiin qof aan aqoon badan lahayn, maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inuusan ogaan karin inay tahay server-ka dhcpcd oo ah lama bilaabin.
Sidoo kale ma aanan jecleyn in bakhaarka ciyaarta aan lagu dhaqaajin asal ahaan, ka saarista faahfaahintaas yar, waxay umuuqataa sida distro weyn, in kastoo, aragtidayda, sida KISS distro sida Arch aysan jirin wax, dhadhanka dhadhanka.
Guriga dhexdiisa, waxaan isticmaalayaa Debian Wheezy oo ah in MIR uusan aniga igu saameyn.
Anigu waan taageersanahay MIR, maxaa yeelay waxaan si fudud u haysanaa waqti aad u badan oo aan sugeyno Wayland iyo waxna, Wayland kuma haboona Ubuntu sababta fudud ee isu keenista Ubuntu - Ubuntu taleefanka - kaniiniga Ubuntu ayaa lahaan doona, sidaa darteed way ka sii waxtar badan tahay in la sameeyo Mir si ay u sugto Wayland inay diyaar ahaato oo ay tahay in la arko haddii uu la kulmayo waxa ay ugu baahan yihiin isku soo dhawaanshaha… taasi waa sababta aan ugu maleynayo in Mir uu yahay go'aan wanaagsan xitaa haddii uu muran ka jiro
Ku jawaab kesymaru
Wayland waa diyaar, waxay jeceshahay inay ku celiso beenta.
Nooca ay deggan tahay ayaa la sii daayay bilo ka hor.
Maalmo yar ka dib ayaa mobiilkii ugu horeeyay ee watay wayland la siidaayay bilawga sanad kale KDE ka dibna Gnome oo taageero la siidaayay.
Kalandarrada leh sii deynta waa kuwo caam ah, yeynaan wax iska yeelin.
Anigu waxaan ahay aakhirka isticmaalaha lint mint iyo ubuntu, saldhiggeyga distro wuxuu ku saleysan yahay xirmada URPMI: MAGEIA iyo OPENMANDRIVA. Wax Canonical waa bilaash sida GNU / Linux si loo go'aansado wadada loo maro ka dib markay sii wataan isticmaalka kernel-ka taasna waxay ka dhigeysaa inay ka mid noqdaan bulshada haddii aan jeclaanno iyo haddii kaleba. Nasiib wacan horumarkaaga mir ...
Sida ku xusan faalladaada. Macluumaad badan oo khaldan ayaa jira. Canonical wuxuu si fiican ugu dhegi karaa Wayland, laakiin waxay gaareen go'aan, siyaasadeed, iyo waliba ixtiraam.
Dhab ahaan, Wayland waa diyaar kahor Mir. Canonical wuxuu rabaa inuu yeesho adeegeeda garaafka ah si uu u maamulo iyada oo ciddii si kale wax u tidhaahdaa ay is nacayso
Haa, ma aanan ogeyn inay diyaar tahay, waxa aan u maleynayaa in Ubuntu ay go'aansatay inay u adeegsato Mir halkii ay ka isticmaali lahayd Wayland xaqiiqda fudud ee isu soo dhowaanshaha, taas oo ah, sida loo qaadi karo Wayland, waxay ku socotaa mobilada, kiniiniyada, miisaska kumbuyuutarka (taasi waa Xaqiijiyay) iyo Tv?, waxaan u maleynayaa inay tahay sababta ay u go'aansadeen inay horumariyaan Mir, way fududahay in la horumariyo Mir iyo inay lahaato astaamahaas muhiimka ah ee laga soo bilaabo xoqidda Wayland iyo wax ka qabashada dhammaan saameynta ay u baahan yihiin.
Wayland waa diyaar, halka Mir uusan aheyn, qaar baa oran doona, laakiin markii Mir diyaar yahay, sida caadiga ah hadii uu wato desktop, mobiles, tablet iyo TV, ii sheeg Wayland waxay taageertaa hada oo dhan si dhab ah ayadoon loo baahneyn in wax la qaado? (Ma garanayo sababta aan u waydiiyo) haddii kale, markaa diidmo sidee ah ayaan u isticmaali lahaa wax aan u rogi karin mobilada marka aan raadinayo isku-xirnaanta?
Wayland horeyba way u sameysay taas ... sababta kaliya waxay ahayd inay doonayeen inay ku sameeyaan qaabkooda, waana taas.
Faalladayda waxaan kuu sheegay in maalmo yar ka dib taleefanka ugu horeeya ee wata Wayland uu soo baxo (waad google kartaa "mobile jolla"), waxaan u malaynayaa inay taasi cadeynayso wax kasta oo aad sheegto.
Tizen sidoo kale waxay u isticmaali doontaa Wayland qaybteeda soo socota, mana xasuusto mid kale oo loogu talagalay baabuurta
Way kuu sheegeen aniguna adigana waan kuu sheegayaa: haa wayland waa la qaadi karaa waxayna ka shaqaysaa deegaanno kala duwan.
Waxaad sameysaa isla qalad nacas ah inaad mar labaad lahadasho adigoon marka hore baarin. Waxaan kugula talin lahaa inaad waxyar yareysid su'aalaha caqabada ah ama aad doorbideyso inaad isbarbar dhigto dhul waynaha iyo mir, sidaa darteed waxyar ayaad naftaada la socodsiineysaa ka dibna xorriyad buuxda waxaad kuheleysaa waxaad heshay. Sow sidan ugama fiicna?
Sababta kaliya ayaa ah tan caadiga ah; ku xidho.
ahaha kani wuxuu rumaysan yahay dhamaan beenta xD ee had iyo jeer wax sheegta runtiina waa wax kale
Iyada oo waayadan dambe Canonical, waxaa fiican inaadan aaminin ilaa aadan wax arki karin.
MIR waxay u taagan tahay sameynta 3 jeer shaqo ka badan iyo ficil ahaan faa'iidooyin la'aan, maadaama dhamaadka maalinta ay tahay Wayland oo leh API gaar ah (oo ku dareysa lakabka iswaafaq la'aanta).
Haddii Canonical ay maamusho inay qabato dhammaan shaqooyinka keligeed, hambalyo, weli waxaan sugayaa taleefan casri ah oo ku shaqeeya nidaamka GNU / Linux qaab ahaan, android ama FFOS, haddii ubuntuphone uu sameeyo, waan hubaa inaan isku dayi doono.
Raacista raadka Apple ma xiri doono koodhka maxaa yeelay waxay leedahay ruqsad GPL, si fudud uma sameyn karaan (Ka dhig mid aad ugu tiirsan waxyaabo gaar ah, inay macquul tahay in lala qabsado waxyaabaha kale ee loo yaqaan 'distros', waa wax kale).
Christian Ramos dijo
Xaqiiqdii sidoo kale waxaa loo heli karaa 14.04 iyada oo loo marayo ppa si loo tago khafiifinta iyo hubinta khaladaadka, kaniisadu had iyo jeer waxay sameysay isku mid, iyagu ma dejiyaan qaab ahaan laakiin horay ayaa loo isticmaali karaa
Jawaab Cristian Ramos
Su'aal ahaan: Miyay Midnimada 8 ugu dambayntii aadi doontaa Qt mise waxay sii wadi doontaa inay ku tiirsanaato Gnome?
Waan fahamsanahay inaad adeegsan doontid Qt.
Waxa aniga ii muhiim ah ayaa ah in qofkasta oo guuleystaa uu guuleysto, waa midka sifiican ushaqeeya oo ka dhameystiran, iyo in kastoo aanan runtii u isticmaali karin mir midnimada, xorg la’aanta, ma dhihi karo sida ay wax u socdaan.
shaqsiyan waxaan door bidayaa in wayland ay guuleysato sidoo kale kan kaliya ee taageera mir waa canonical, isagu waa kan kaliya ee ka hor yimid hada
Waxaan u maleynayaa in muddo kadib aan arki doono ubuntu oo wata koodh xidhan oo qiimo leh $, runti weligay ima jeclayn laakiin waa wax shaqsi ah waxaan doorbidaa inaan aabaha (debian) u isticmaalo caruurta (ubuntu, mint iwm) sifiican ayuu u shaqeeyaa waana ogahay la qabsiga isticmaale kasta
Nin kale oo u hadlaya kaliya inuu hadlo oo aan waxba ka ogayn aragtida hoose iyo suurtagal la'aanta Ubuntu, sida ay hadda tahay, waa la xiray.
doqon badan ayaa tihiin adiga oo kaliya dhaleeceeya oo aan sharaxaad ka bixin xagjir
Sidee Ubuntu u xirnaan doonaa haddii dhammaan xirmooyinka aasaasiga ah ay ka hooseeyaan gpl3 ama gpl2? .., Dukumiintiyada kahor.
Aan aragno, aan u adeegsanno waxaas yar ee aan ugu yeerno maskaxda, arrinta cawlan ... ma ogtahay, midka aan lagu isticmaalin isticmaalkiisa, ma kula tahay?
Haddii aan ka faa'iideysano oo aan aqrinno saddex sadar oo shatiga GPL ah, ama ugu yaraan maqaal aasaasi ah ... ama xitaa faallo hordhac ah, maadaama aad leedahay kubbadaha si aad iigu wacdo nacas ah "sharraxaad ka bixin", ka dibna ku baryaya inaad adigu Waxaan horey u leenahay aqoonta ugu yar Waxaan ogaaneynaa in Ubuntu ay ku saleysan tahay gabi ahaanba barnaamijyada shatiyeysan ee ka hooseeya GPLv2, v3. Sidaa darteed, haddii aan tixraacno maqaalkan waxaan ka helnaa qaybtan aasaasiga ah:
Mid ka mid ah kuwa ugu isticmaalka badan waa GNU General License (GNU GPL). Qoraagu wuxuu hayaa xuquuqda daabacaadda, wuxuuna u oggolaanayaa dib-u-qaybinta iyo wax-ka-beddelka shuruudaha loogu talagalay in lagu hubiyo in dhammaan noocyada wax laga beddelay ee barnaamijka ay ku sii hoos jiraan shuruudaha xaddidan ee GNU GPL laftiisa. Tani waxay ka dhigeysaa wax aan macquul aheyn in la abuuro shey leh qaybo aan shatiyeynin GPL: dhamaanteed waa inay noqotaa GPL.
Maxay taasi noo tahay? Fudud, Canonical wuxuu ku saleysan yahay Debian saw maaha? Oo waxay isticmaashaa qaybo badan oo GPL ah, sax? Hadda, kernel-ka Linux wuxuu shati ka haystaa GPLv2 sax? Marka, isku day inaad ku qasabto maskaxdaas inta aad awooddo, kaalay, waan ogahay inaad isku dari karto qaybaha ...
Haddii ay dhacdo in aadan sameyn karin, waan shiidi doonaa oo dib ayaan u soo celin doonaa:
Haddii qaybaha aasaasiga ah ee 'distro' ay ku saleysan yihiin liisanka bilaashka ah ee aan u oggolaanayn shaqada in laga soo dheereeyo mooyee haddii aysan shati uga haysan isla liisanka iyaga daboolaya, markaa ma awoodo, xaalad kasta ha noqotee sharci xir koodhkaaga Miyaad qabataa chiquitin? Malaha maya, sidaa darteed waan sii wadaa. Sidaa darteed haddii aad tixgeliso in dhab ahaantii aasaaskeeda distoorka, akhri Midnimada iyo qaybaha kale (oo aad ka tagto qaybaha asaasiga ah sida Debian iyo kernel) ayaa sidoo kale ruqsad ka haysta GPLv3 ... Sidee cadaabta u malaynaysaa inay socdaan si loo xiro qaabka nacaladda! JINSIGA!
Si aad u sameyso waxaas oo kale waxaad u baahan tahay:
a) Ka samee geedo gebi ahaanba xoqan, bedel liisanka wax kasta oo ay soo saareen oo ha isticmaalin qaybaha bilaashka ah.
b) Qaado kernel BSD ah, u shaqee muddo aad u xun oo u beddelo rukhsadda wax soo saarkooda BSD, una isticmaal alaabooyin la mid ah oo shati leh oo la jaanqaadaya waxa ay horumariyaan.
Waxaas oo dhami waxay ku lug leeyihiin shaqo arxan darro ah oo adag iyo kheyraad iyo waqti labadaba.
Wali miyaad u malaynaysaa inay macquul tahay? Gunaanad noocan oo kale ah miyuu aad u adkaaday in la caddeeyo? Ma awoodaa inaad wax ku biiriso ama aad wax uun ku dhaleecayso raaxada «ugu doqonsan ee aad tahay»?
Baro, fadlan, inaad farahaaga ka joojiso kumbuyuutarka markii aadan sameyn doonin wax ka badan fuck, maxaa yeelay haddii aad igu dhaleeceynayso inaanan waxba sharraxin, adigoon xitaa sameynin, markaa waxaad ku dhaceysaa isla khiyaanada iyo adigu waad is burinaysaa.
Ruqsadda Dadweynaha ee GNU kuuma oggolaanayso inaad ku wareejiso mudacyada. Sidaa darteed, Ubuntu ma noqon karto mid lahaansho leh (illaa ay beddesho kernel-ka oo ay qabato shaqada adag ee dib-u-shatiga wax kasta oo leh liisanka BSD, dabcan).
Waa salaaman tihiin, sidee ku samaysay Pear OS oo loo malaynayay inuu ahaa Gnu / Linux midig-gacan-bixiye oo ay gaar u siiyeen, runtiina waxay ku saleysneyd Ubuntu, qofna wax fikrad ah ma hayaa?
Ku jawaab gabito
Iyada oo ku adkaysiga badan ee Ubunteros iyo nacabyadooda, waxay ahayd waqtigii MIR la heli lahaa si loo tijaabiyo.
Waxaan u maleynayaa inay isticmaali doonto XMir.
waxa ugu aaminka badan waa inaad isticmaasho xmir, canonical marwalba waa been, wuxuu dhahaa hal shay runtiina waa mid kale
Canonical horey ayaa loo soo sheegay in nooca 14.04 uu isticmaali doono xorg halka 14.10 uu la imaan doono mir karti 100% si toos ah si loo helo waqti ku filan oo lagu nadiifiyo kahor Ubuntu LTS cusub.
Xitaa MuyLinux ayaa xaqiijiyay.
Waxaan isticmaalaa Chakra mana adeegsado Ubuntu laakiin waxaan fahamsanahay in wax soo saar iyo gadaashiisa ay tahay shirkad qaabaynaysa oo go’aamaysa, ma fahmin nacaybka ay dadka u qabaan ee aan isticmaalin. Qaar kale waxay ka cawdaan kala qaybsanaanta 'Linux distro' iyo kuwa kale oo ku saabsan koorsada Ubuntu waxaanan ka cabanayaa distoorka cusub ee aan ku soo kordhinayn wax cusub ama hoos u dhac.
"Nobility wuxuu kugu qasbayaa inaad aqoonsato shaqada Canonical" waana wax fiican, waa hagaagsan tahay Canonical, ha la ahaado, waxay leedahay bedel muhiim ah sida mishiinka sawirada ee MIR, taasi waa wax fiican.
"Uma maleynayo Ubuntu inuu raacayo raadadka Apple", waxaan u maleynayaa sidaas waana dhiirrigelinteeda habka guud, GUI, nidaamka deegaanka, falsafada, laakiin ma ahan shatiyeynta, ilaha furan ama la xiray, taasoo muujineysa in xoogaa ka hor imaaneyso sadarka soo socda Dabcan haddii soo jeedintaadu tahay XORRIYAD oo aan ahayn iska horimaadka u dhexeeya xidhan ama furan.
«... wuxuu la dagaallamaa in runtu i qudhuntay ...», waan salaamayaa, waan u dabbaaldegaa dabeecaddan, Linux ka dhig adduun nadiif ah, oo aan lahayn wax xarago ah.
Ku jawaab Juanjp
David bidix dijo
Maya maya maya Waan aqriyay faallooyinka waxaanan arkaa in qofna uusan caddayn inuu ogaanayo dhibaatada dhabta ah. Canonical wuxuu ku jiraa xuquuqdooda muuqata ee barnaamijka ama wixii ay doonaan. In la dhaho waxay "sii laba jibaarayaan" ama "kala qaybinta bulshada" iyo "abuurista kala-jajab" waa fikrado iska caadi ah, waxaana si gaar ah u raacsanahay kaliya labada hore. Sidaad dhammaantiin dhahdaan, ama badankood, nimcada bulshada Furan Furan waa suurtagalnimada soosaarida. Dhibaatadu waxay tahay in Canonical uu leeyahay taariikh dheer oo si sax ah uga soo horjeedda wada-noolaanshaha bulshada. Waxyaabaha kale, maqnaanshaha wax ku biirinta waxa loo yaqaan "kor u kaca" Ingiriisiga laakiin turjumaadiisa ma aqaan: waxay leeyihiin xirmo aan dhammaad lahayn oo laga sameeyay maktabadaha iyo barnaamijyada ay adeegsadaan, laakiin xitaa haddii ay sii daayaan koodhka, si cad uma sheegaan ku darso mashruuca asalka ah. Caddaynta? Waxaan ku xujeynayaa qof walba inuu helo Unity si uu uga shaqeeyo qaybinta aan ahayn Ubuntu iyada oo aan la beddelin wax maktabado ah. Iyadoo Mir, dhaqankooda bulshada ka soo horjeeda ayaa ka sii dartay: waxay jebiyeen ballanqaadyadoodii (waxay ku darsadeen lambarka Wayland) waxayna rabaan barnaamijyo aan ku xirneyn Ubuntu ama aan ku xirneyn inay ku daraan koodh mashruucyadooda si gaar ah maxaa yeelay Canonical way fiicantahay markay tahay Taariikhda ayaa muujineysa inaysan wax ku darsan doonin inta ugu yar Mir ee loo adeegsado meel ka baxsan Ubuntu (darawalada Intel, KWin, waxaan u maleynayaa in wax xitaa la nidaamiyay waqtigaas). Kuma qanacsana ficilkan isla weyni (ee waxoogaa iiga goynaya), markii la diiday nabarradiisii, shakhsiyaad cayiman oo aan wada ognahay ayaa hadalo xambaarsan macno siyaasadeed oo aan munaasib ahayn ku leh BULSHADA oo qof ugu yeeraysa "ilaha furan ee shaaha." Tan oo dhan waxaan idhaahdaa waa uun qayb ka mid ah saabuunta opera ee qofkasta oo caqli saliim ahi fahmi karo, in ayada oo aan la garanaynin sida wax loogu diyaariyo heerka macaamiisha iyo daaqadaha, macquul maaha in la xukumo in koodhka Mir runti si xun u xun yahay u qoran sidii hore loo yidhi.
Si aan u cadeeyo mowqifkeyga: imisa Ubuntu ayaa i bartay Linux, laakiin hada aad ayaan ugu faraxsanahay Arch iyo KDE. Guusha Mir gabi ahaanba aniga dan kama lihi aniga oo la siiyay in laga yaabo inuusan waligiis ka bixin Ubuntu.
Ugu dambeyntiina, haddii aanan soo qaadin shaqsiyaadka aan xusay waa sababta oo ah waxaa si fudud looga heli karaa raadinta, laakiin haddii loo baahdo waan bixin karaa sida ugu dhakhsaha badan markaan helo waqti dheeri ah.
Jawaab David Izquierdo
Iyadoo la raacayo nuxurka boostada, way fiicnaan lahayd haddii bulshada GNU / Linux ay fahmaan in kuwa u fekeraya si kala duwan, oo u shaqeeya si ka duwan, laakiin leh ujeedo la mid ah kuwa kale: (ballaadhi GUNU / Linux, ka dhig inay gaarto dhammaan isticmaalayaasha barnaamijka). wuxuu mudan yahay ixtiraam iyo inuusan ulaha ka helin giraangiraha. Canonical wuxuu xaq u leeyahay inuu soo saaro codsiyo badan oo lahaansho inta ay ugu baahan yihiin OS-ga. MIR IYO WAYLAND way wada noolaan karaan iyada oo aan wax dhibaato ah ku qabin bulshada Linux.
Qormooyin Weyn !!! X.org waa laga duudsiyey tikniyoolajiyadda maanta (taasna waxay keenaysaa isbeddel weyn) ... Soo-saarayaashu waxay hal-abuurnimo sii kordhayaan oo teknoolojiyad cusub sida jaantusyada 'Hybrid' ay aad ugu daaheen Xorg (Markaa AMD's Power Play waxaad u baahan tahay inaad dib u bilaw adeegaha X kombiyuutarka (kaas oo ku dhaca Windows-ka nidaamka nidaamka)… Taageerada bulshada oo dhan, soosaarayaasha iyo Canonical waxaa hubaal ah inaan lahaan doonno barxad weyn oo karti u leh la tartamida shuruudaha maanta luck Nasiib wacan Kanonical… !!! Wax walba si fiican ayey u socdaan ... Waxaan sugi doonaa Ubuntu 14.10 (Waxaan ku faraxsanahay isticmaale Manjaro hadda laakiin taageerada waxaan u maleynayaa laba jeer)
Xaqiiqdii, qof walba wuu faraxsan yahay maxaa yeelay kaniisaddu waxay billowday adeegeeda gaarka ah, waxayna isu caddeeyaan inay yiraahdaan wayland iyo mir way wada noolaan karaan.
laakiin dhibaatada dhabta ah ee halkan kajirtaa waa taageerada, nvida iyo amd oo si dirqi ah u bilaabaya wadayaasha GNU / Linux, hada ma waxay iska dhigayaan inay taageerayaan wayland iyo mir isla waqtigaas?
Fadlan, waxa ugu aaminka badan waa amd support mir, maadaama ay kaliya daneynayaan nidaamka leh qoondada ugufiican, iyo sida ay hada ubuntu tahay, markaa inta kale ee aan u isticmaalno qashin kale oo kuyaal jasiiradaha halka aan ku nuugno.
Waa hal shay in lagu kala qaybsamo waxyaabo ay ka mid yihiin barnaamijyada iyo deegannada desktop-ka, laakiin shay daruuriga u ah server-ka muuqaallada leh waa wax aan la aqbali karin.
Canonical uma maleynayo waxtarka qof walba, haddii uusan ahayn kaliya nidaamkaaga.
Jawaab ku siiso martidaadiyaha0101
Taasi waa xaqiiq marka aad fiiriso Linux, waxaad fiirineysaa Ubuntu, waana taas sababta dhaqan ahaan Ubuntu u leedahay taageerada darawalnimo ee ugu fiican (mid gaar ah ama mid bilaash ah), si loo muujiyo badhan, oo leh Openuse 13.1 nooca ugu dambeeya ee darawalka AMD uusan haysan Waxay leeyihiin karti u leh iyo nooca beta-ka ee Ubuntu haddii ay shaqeysay, iyo isticmaalka darawalkaas gaarka loo leeyahay ayaa go'aamiya isticmaalka ama isticmaalka qaybinta, maxaa yeelay la'aanteed waxaa jira buugaag badan oo kuleyl ah
Waxbadan ayaan ka akhriyay dhibaatada ay leedahay xad-dhaafka xad-dhaafka ahi ...
Waxbadan ayaan ka akhriyay dhibaatada cabitaanka badan uu sameyn karo ...
Waxbadanna waan ka aqriyay waxyeelada galmada xad dhaafka ah
Waxaan go aansaday inaan joojiyo aqrinta!
Wax badan ayaan ka akhriyey Ubuntu iyo diidmo ...
Inaan go'aansaday inaan sii wado isticmaalka aabahaa Debian!
Waxaan u maleynayaa in sidaada oo kale, aakhirka dhaliishaas wax halaagga ahi ay isu rogto mid daalan oo aan u roonayn gnu.
Waxaan isticmaalaa Fedora, Arch, Antergos iyo Ubuntu, dhammaantoodna waxay leeyihiin waxyaabo wanaagsan oo aan ahayn waxyaabo aad u wanaagsan, sidaa darteed Mir iyo mashruuc kasta oo wax ku biiriya GNU / Linux waa la soo dhaweynayaa.
Ku jawaab ArcNexus
Hagaag, waan ku faraxsanahay Manjaro Openbox: D, in qof kastaa adeegsado distro iyaga ku habboon, waxa fiican ee ku saabsan dunida Linux, kala duwanaanshaheeda.
Ku jawaab frikilui
Kahor intaan qof bilaabin abuurista khilaafaadka xun, aan maskaxda ku hayno in shey kasta oo cusub la safeyn karo. Taasi waxay ka dhigeysaa mid xiiso leh maxaa yeelay marwalba waa la cusbooneysiiyaa, way isbeddelaysaa, marka lagu daro xaqiiqda ah inaan dhammaanteen u helnay adeegsiyo cusub sidaas darteedna waa inaan mar labaad horumarnaa. Sannadihii (nus qarni), anigoo ah xirfadle caafimaad oo aan tababar ku lahayn nidaamyada, Linux waxay ii ahayd akadeemiyad aad u wanaagsan oo markaan la hadlayo dhalinyarada, bil kasta hal ama labo ayaa iga codsada inaan ka taageero ku rakibidda kombuyuutarkooda iyo markaa I Way tirinayaan ama way ku faraxsan yihiin inay la jiraan sheyga. Marka: dhiirrigeli oo hal-abuur ha noolaado HAMBALYO dhammaan Linux distros
Marco Mtz. dijo
Sidee ayey u saameyneysaa ubuntu keebaa mir? Kaliya waxay rabaan inay gacanta ku hayaan horumarintooda, waxayna doonayaan inay hubiyaan in dhammaan isbeddelada ay doonayaan inay ku shaqeeyaan, waxaan isticmaalaayay Linux sannado oo waxaan isticmaalayay qaybinta ku saleysan Ubuntu, waayo? Sababtoo ah qaybintaani waxay dayactiraysaa khaladaadka ubuntu lafteeda ay ka tagayso, sida ku saabsan lint mint, taas oo ah jahwareer aad u fiican oo hagaajisa khaladaadka kuwa khaladka ah aysan saxin, anigu waxaan ahay isticmaale-dhexe, ma ihi khabiir Linux ah, laakiin hal shay oo aniga si uun ii dhibaya waa kuwa lafta cas ee u maleeya inay yihiin xariifyo, qofku wuxuu fikrad ka bixiyaa waxa uu garanayo, laga yaabee inaan wax yar ka war qabno waxyaabo badan, laakiin Maaha iyaga inay xumaadaan markay su'aal ayaa la weydiiyaa ama waxbaa la faalleeyaa, sida fasalka oo kale oo ku xumeeya asaga oo leh isticmaal cawlka madaxa ku jira ama wax naftiisa ah, faallooyinka noocaas ah ayaa ah waxa dadka ku kaxeeya inay isticmaalaan Linux, maxaa yeelay markay weydiiyaan waxay dareemaan in la soo weeraray, waa ceeb in qofkani uusan dhab ahaan u adeegsan maadada cawlan sida uu sheegay, caqligiisa iyo macluumaadkiisa waa in lala wadaago iyadoon laga xumaanayn, mise taasi miyaanay ahayn ruuxa dunida Linux guud ahaan? barida iyo wadaagida aqoonta qof walba? Waa wax laga xishoodo inay noocyadaas dadku haa yihiin, waa taas sababta dadka aan loogu dhiirrigelin inay adeegsadaan linux, maxaa yeelay waxay noo arkayaan maskax weyn iyo wax laga xumaado oo haddii aad wax weydiiso ay kuugu jawaabayaan sidii adoo doqon ah, laakiin waxaa jirta odhaah taasi waxay leedahay, waxaa ka aqoon daran qofka aan waxba weydiinin, marka loo eego kan u maleeya inuu wax walba ogyahay.
Ku jawaab Marco Mtz.
Michelangelo AR dijo
Waan ku faraxsanahay Ubuntu, xaqiiqdii, waxaan iibsaday Aquaris E4.5 Ubuntu Edition, iyo, in kasta oo ay weli hayso barnaamijyo yar, waan ku faraxsanahay ...
Jawaab Miguel Ángel AR
Cilad bixinta Dhibaatooyinka Maqalka ee Gigabyte GA-H61M-DS2 Motherboard